Nezvedu - Sichuan Junling Technology Co., Ltd.
Ndisati ndasuma kambani yedu, ndinofanirwa kuzivisa nzvimbo yakagadzwa kambani yedu - Chengdu. Sezvinozivikanwa, Chengdu ine nyika-inozivikanwa hofori panda ex-situ kuchengetedza nzvimbo, tsvagiridzo yesainzi uye nzvimbo yekucheresa - Chengdu Giant Panda Kuberekesa Research Base, iyo inoshanda se "Giant Panda Ex-situ Conservation Ecological Demonstration Project" kuchengetedza nekubereka hofori pandas uye mapandama matsvuku ari mungozi muChina Mhuka dzesango dzinozivikanwa pasi rese. Panguva imwecheteyo, Chengdu zvakare iguta rine hanya uye rinoshivirira zvipfuyo zvakajairika.
Isu tinochengeta chipfuwo chako Sezvaunoitira hanya
Zvitoro nekutengesa hazvibatanidze mhuka dzinovaraidza
MuChengdu, unogona kutora zvipfuwo zvako kutenderera mumugwagwa usingapofumadzwe (ehe, fungidziro ndeyekuti iwe unofanirwa kukweva tambo uye uve neanofamba-famba). Maresitorendi mazhinji muChengdu haadi kuunza zvipfuyo, asi zvipfuwo zvinogamuchirwa. Kune mamwe mashopu ane zvigaro, mahwendefa, madziva emvura yekunwa, nezvimwewo kunyanya zvipfuyo.
Katsi dzakarasika uye imbwa dzakarasika hadzizotambura nenzara muChengdu
Kune dzakawanda nharaunda dzekare muChengdu, izvo zvakare zvinoita kuti imbwa zhinji nekatsi zvioneke munzvimbo idzi. Asi usazvidya moyo pamusoro pekuti vane nzara. Vanhu vazhinji munharaunda vanovapa chikafu. Nekuda kweizvozvo, zvidimbu zvidiki izvi hazvityi vatorwa uye kunyange kunamatira. Vanhu havavarambe. Kunyangwe vamwe vanhu vachiti ivo vakasviba uye vakatakura mabhakitiriya, vanhu vazhinji vachiri kuratidza maitiro ekugamuchira kwavari.
Kune mazana enzira dzekuda mhuka diki muChengdu
Kuchengeta kwaChengdu uye kushivirira kwezvipfuyo kunoonekwawo mune zvese zvinhu. Semuenzaniso, dzimwe nzvimbo dzakavaka mapaki ezvipfuyo, mazana ezvipatara zvezvipfuyo, fairs dzechipfuwo, mapaki mazhinji ezvipfuyo, zvitoro zvekofi katsi ... zvese zvinoita kuti vanhu vafunge kuti kuchengeta zvipfuyo muChengdu chinhu chinofadza chose. .
Kubva pane ino nharaunda netsika, Sichuan Junling Technology Co, Ltd., kambani yezvigadzirwa zvemhuka iri muChengdu, hongu, ichatarisa zvakanyanya kunyaradzo yemhuka dzinovaraidza uye nyore kwevaridzi vezvipfuyo mukutsvaga kwechigadzirwa uye kusimudzira, uye shingairira kugadzira varidzi vezvipfuyo Uye zvipfuyo zvine mararamiro ari nani pamwechete, ichi zvakare ndicho chinangwa chepakutanga chekambani yedu.